February 3, 2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
သူမတို့ ညီအစ်မ သုံးယောက်ရှိသည်။ မိဘဆုံးသွားတော့ ညီအစ်မသုံးယောက် အတူတူနေကြသည်။ ပထမ အလတ်တယောက်ဖြစ်သူ ခင်မူ အိမ်ထောင်ကျသည်။ အိမ်ဝိုင်းက နည်းနည်းကျယ်သဖြင့် ထိုအိမ်ဝိုင်းထဲတွင်ပင် အိမ်တလုံးဆောက်သည်။ နောက် အကြီးဆုံး ခင်ဦးအိမ်ထောင်ဆက်ကျသည်။ သူမက အိမ်ခွဲမည်လုပ်သော်လည်း ခင်စီကို စိတ်မချသေးသဖြင့် အိမ်မခွဲသေး။ အစ်မတို့နှင့် သူမက ကိုးနှစ်ကွာသဖြင့် ခင်စီက ခုမှ ကိုးတန်းကျောင်းတက်နေဆဲ ဖြစ်ရာ တယောက်တည်း ကျန်ခဲ့၍ မဖြစ်နိုင်သဖြင့် ခင်ဦးယောက်ျားကို အိမ်ပေါ် ခေါ်တင်ထားသည်။ ခင်ဦးယောကျာ်းက ဖိုးဆိုးဟုခေါ်ပြီး ခင်မူယောက်ျားက သန်းနိုင်ဟုခေါ်သည်။ အားလုံး တောင်ယာလုပ်ကြသူ ဖြစ်သဖြင့် အမြဲခြံသွားလေ့ရှိကြသည်။ ယောက်ျားများက မနက်ခင်းစောစော ထဆင်းပြီး မိန်းမများက နေ့လည်ပိုင်း ဆက်ဆင်းသည်။ ညနေပိုင်းတွင် မိန်းမပြန်လာတော့ ယောက်ျားက ယာထဲသွားသည်။ အလုပ်ကြမ်းကို နေအေးချိန်လုပ်ပြီး […]
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on သူမနဲ့ခဲအိုများ
“ဖြန်း….”လွှတ်စမ်း..ရသ နင်ငါ့ကို ခု လွှတ်…… ထူပူသွားတဲ့ ဘယ်ဘက်ပါးကြောင့် မမနဲ့ လူချင်းခွာပြီး ကျနော်အမြတ်တနိုးကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ မျက်နှာလေးကို ငေးရင်း…..။ နင် ငါ့ကို ဒီနေရာကို ချိန်းတာ ငါ့ကိုဖက်ပြီး ငါ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းဖို့လား….နင့်ရဲ့ အရေးတကြီး ကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာ ဒါလား…. “မဟုတ်ဘူး မမ” မမနဲ့သန့်စင်ဆိုတဲ့ ဘီးကြဲ လက်ထပ်ဖို့တစ်ပတ်အလိုမှာ ကျနော့်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးချစ်ခဲ့ရတဲ့ မမကို ခနတဖြုတ်အဖြစ်တွေ့ခွင့်မရှိတော့ ဘူးလား…။ ပြောစမ်းပါအုံး ဒေါ်စုစုမောင် …. ငြိတွယ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သံယောဇဉ် တွေက သဲထဲရေသွန် ဖြစ်ကုန်တာလား၊အသွေးအသားတွေပုံအောပြီး ချစ်ခဲ့ရတာတွေက တိမ်ပေါ် အရုပ်ရေးသလိုလား….. “ခင်ဗျား ဗျာ”ရက်စက်လွန်းမနေဘူးလား…. စကားလုံးတွေကို နှုတ်ခမ်းဝမှ တရစပ်ဖွင့်ဟရင်း ကျနော့်ပါးပြင်ထက်ဆီမှာ မျက်ရည်တွေ စကျလာပြန်တယ်….။”နေရာကား အထင်ကရနယ်မြေ အင်းလျားကန်ဘောင်” ထိုကန်ဘောင်ထက်မှာ အင်းလျားရေပြင်ကိုဘေးခိုင်းပြီး မျက်ရည်စတွေနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်နေတဲ့ “ရသနဲ့စုစုမောင်”။ […]
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on တွေ့ကြုံဆုံကွဲ
ဒေါ်စံပါယ်က အသက် လေးဆယ့်ငါး လောက်ရှိပီ သူက အမြဲတမ်း မြန်မာဝမ်းဆက် ဝတ်တယ်၊ သူ့ဖင်ကြီးတွေက ကောက်ချိတ်နေပီး နို့တွေကလဲ အယ်နေတာပဲ၊ သူနဲ့တွေ့ပုံက တနေ့ ကျနော် အလုပ်က အပြန် လမ်းမှာ အထုတ်တွေမနိုင်မနင်းနဲ့ အန်တီတယောက်ကိုတွေ့တော့ ကျနော်လဲ ကူညီချင်တာနဲ့ ” အန်တီ ကျနော် ကူသယ်ပေးရမလား ” ” အေးကွယ်ကျေးဇူးပါသားရယ် ” ” ဟုတ် ရပါတယ် ဒါနဲ့ အန်တီက ဘယ်မှာနေတာလဲ ” ” အန်တီက မုဒိတာအိမ်ယာမှာကွယ့် ” ” ဟုတ်လား ဒါဆို ကျနော်နဲ့အတူတူပဲပေါ့ ကျနော် က အဆောင် စီ ငါး လွှာမှာ နေပါတယ် ” ” အန်တီကလဲ […]
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on ထိန်းလို့မရတော့ဘူးကွယ်
ငါ့တူရေလာဦး… ကျော်ခိုင်တစ်ယောက် အိမ်ခန်းထဲမှာ အပြာစာအုပ်ဖတ်ပြီး ဂွမ်းထုနေရာမှ ရေချိုးခန်းမှ ဒေါ်လေးဖြစ်သူ သီသီစိုးရဲ့ခေါ်သံကြောင့် စာအုပ်ကိုချကာ ကပျာကယာထရပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်လိုက်သည်။ တကယ့်ကို အရှိန်ကောင်းပြီးခါနီးအချိန်မှ ခေါ်ခံလိုက်ရသဖြင့် နဲနဲပင် ကျွဲမြီးတိုသွားသလို ရင်တုန်ပန်းတုန်လည်း ဖြစ်သွားသေးသည်။ ရေချိုးခန်းပြင်ဘက်ကနေမေးလိုက်သည်.. ဒေါ်လေးဘာယူပေးရမှာလည်း ဒေါ်လေးသဘက်မေ့ခဲ့လို့အခန်းထဲမှာယူပေးစမ်းပါ။ ကျော်ခိုင်လည်း ဒေါ်လေးသီသီစိုးရဲ့အခန်းထဲက စင်မှာတင်ထားသော သဘက်ကိုယူပြီး ရေချိုးခန်းဘက်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ရေချိုးခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်သည်။ တံခါးပွင့်လာပြီး… ရော့.ဒေါ်လေး..သဘက်…။ အေး..အေး.. ဒေါ်လေးကား ရေချိုးရက်တန်းလန်းကြီးပင် ပါးလျသော ထမိန်အနွမ်းလေးကို ရင်လျားဝတ်ထားပြီး၊ ရေလောင်းချိုးထားသဖြင့် ကိုယ်မှာ ကပ်နေသည်။ မျက်နှာလွဲမလို့ကျန်သော်လည်း လှည့်ထွက်သွားသည့် ဒေါ်လေးရဲ့တင်ပါးကြီး များကိုကြည့်ကာ ကျော်ခိုင် တံတွေးများပင် နင်သွားသည်။ အောက်က သူ့မွေးရာပါညီလေးကလည်း ထောင်ထလာသဖြင့်ရေချိုးခန်းတံခါးကို အမြန်ပိတ်ပေးလိုက်ရသည်။ မဖြစ်ဖူး အခန်းထဲကို မြန်မြန်ပြန်မှလို့ တွေးလိုက်ပြီး […]
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on သူမ၏အလိုကျ
ဒေါ်မျိုးမမ လူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရန် သူမတို့ အချိန်းအချက်လုပ်ထားရာ တည်းခိုခန်းသို့ ရောက် လာခဲ့သည်။ သူမနှင့် တွေ့ရမည့်သူ၏ အခန်းတံခါးကို ခေါက်လိုက်ရာ ထိုသူ တခါးလာဖွင့်ပေးတော့သူမ ဝင် လာခဲ့သည် တံခါးလာဖွင့်ပေးသူမှာ သူမတို့ ရက်ကွက်ထဲ တွင်နေသော မြင့်မောင်ပင်ဖြစ်သည် မြင့်မောင်မှာ မျိုးမမ နှင့် ငြိစွန်းနေတာ ခြောက် လလောက်ရှိ ပီဖြစ်သည် သူမ နာမည်မှာ ဒေါ်မျိုးမမုဖြစ်ကာ အသက် သုံးဆယ့်ကိုး နှစ်အရွယ် မုဆိုးမ သားတစ်ယောက် အမေဖြစ် သည် သူမ၏ သားနာမည်မှာ မျိုးမင်းထိုက် အသက် ဆယ့်ကိုး နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည် သူမသည် လင်ယောက်ကျား ဆုံးပါးထဲက နောက်အိမ် ထောင်မပြုပဲ အပြင်တွင်ပင် သူမသားမသိအောင် သူမနှင့် အသက်အရွယ် တူသော ယောက်ကျားကော။ […]
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on ကုန်းတတ်သောကြိုက်ကုန်း
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on တအားစောင့်နေတာ
ကျမဘ၀တွင် ရည်းစားငါးယောက်ခန့်ထားခဲ့ဖူးရာ နှစ်ယောက်နှင့်သာအလိုးခံခဲ့ရဲ့ဖူးပြီး ရည်းစားမဟုတ်သူ သူစိမ်းများနှင့်ပိုပြီးအချခံခဲ့ရသည်။နောက်ဆုံးလင်ရသည်ထိ ထိုကံမျိုးပါခဲ့သည်။ ကျမသည်ရည်းစားများခဲ့ရ လူစိမ်းများနှင့်အလိုးခံခဲ့ရသော်လည်းသော်လည်း ပွေချင်ရွုပ်ချင်သူမဟုတ်ပဲ သာမန်ရိုးရှင်းသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်သာဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ ကျမအပျိုဘော်ဝင်စအရွယ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိမိန်းကလေးတိုင်းကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ရည်းစားထားရမည့်အရွယ်တွင် ရည်းစားထားသည်။ထိုအခါ ကျမနှင့် ပတ်သက်ရသည့် ယောက်က်ျားများ၏ ကျမအပေါ် ဆက်ဆံမွုများအရ ကျမမှာ အလိုးခံခြင်းဟူသောအရသာကို စွဲလန်းခဲ့ရပြီး ယေက်က်ျားတို့၏ အပွတ်အသပ်၊အထိအတွေ့။ အကိုင်အတွယ်၊ခံရလျှင် မည်မျှဟန်ဆောင်ပြီး ငြင်းဆန်ပါသော်လည်း ထိုမျှစွဲလန်းရသော ကာမတဏှာတောထဲမှ ထွက်မရတော့ပဲ ကျမကိုဦးဆောင်သူ၏အလိုကျ အလိုးခံရမ္မက်ဖြေစရာ ခပ်ရွရွမိန်းမတစ်ယောက်သာ ဖြစ်ရတော့သည်။ ကျမစတင်အလိုးခံရဖူးသည်မှာ ဆယ်တန်းနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်သည်။ ကိုးတန်းနှစ်တုန်းက ရည်းစားတစ်ယောက်ထားခဲ့ဖူးသော်လည်း စာပေးစာယူ လမ်းလျှောက်အသံပေးထက်မပိုခဲ့ပေ။ ကျမလည်း ထိုဘဲကိုမကြိုက်ပဲ အပျိုပေါက်ဘ၀ စိတ်ကစား၍သာအဖြေပေးမိပြီး သိပ်မကြာခင်ဖြတ်ပစ်လိုက်တော့သည်။ သို့နှင့်ဆယ်တန်းရောက်သောအခါ ကျမနှင့်တွဲသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏အိမ်နှင့်ကပ်ရက်မှ သူတစ်ယောက်သည် ကျမတို့ကျောင်းဆင်းကျောင်းတက်ချိန်များ၊ ကျူရှင်ချိန်များတွင် နေစဉ်စောင့်ဆိုင်းပြီးကျမကို စလိုက်ပါသည်။ […]
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on ပိုခံချင်လေပါပဲရှင်
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on မနေနိုင်အောင်ပါပဲရှင်
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on ကြောင်ခံတွင်းပျတ်
Posted on February 3, 2021 Author admin	Comments Off on အရသာပေါင်းစုံ